पाथिभरामाताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुहोस् माघ १२ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
पाथिभरामाताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुहोस् माघ १२ गतेको राशिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल माघ १२ गते आइतबार इश्वी सन २०२० जनवरी २६ तारीख माघ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी धनिष्ठा नक्षत्र व्यतीपात योग वालव करण चन्द्रमा मकर राशिमा १६ः५२ बजे सम्म पश्चात कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मातंग योग परिधावीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चन्द्र उदय, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस – ज्यो.प. सरोज घिमिरे
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
मीथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – नजिकका ब्यक्ति बाट धोका मिल्न सक्छ सजग रहनु होला । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । मध्यान पश्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।
तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भौतिक श्रोतसाधनका प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्यक्षेत्रको त्रुटिका कारण आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको गडबढिका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुस् फागुन ७ गतेको राशिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल फागुन ७ गते बुधबार इश्वी सन २०२०
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुस् फागुन ६ गतेको राशिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल फागुन ६ गते मंगलबार इश्वी सन २०२०
पाथिभरामाताले सबैको कल्याण गरुँन ! आज फागुन ५ सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल फागुन ५ गते सोमबार इश्वी सन २०२०
आज फागुन ४ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल फागुन ४ गते आईतबार इश्वी सन २०२०